Law Eh Soe – ဓာတ်ပုံဆရာ လောအယ်စိုးပြပွဲ နောက်တလဆက်တိုးပြမည် – MoeMaKa Burmese News & Media
Law Eh Soe – ဓာတ်ပုံဆရာ လောအယ်စိုးပြပွဲ နောက်တလဆက်တိုးပြမည်
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၂
ယခင်လကတည်းက မြန်မာပြည်၏ ဧရာဝတီနှင့် ရွှေဝါရောင်ဓာတ်ပုံများဖြင့် ပြပွဲကျင်းပနေသည့် နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့၊ CEPA ပြခန်းက ဇွန်လ ၉ ရက်နောက်ပိုင်း နောက်ထပ် တလဆက်ပြီး ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ဓာတ်ပုံဆရာ လောအယ်စိုးက သူ၏ Mother Irrawaddy ပြပွဲကို ဌာနအမေရိကန်နိုင်ငံသားများ တက်ရောက်ကြည့်ရှုကြကြောင်း၊ ဖွင့်ပွဲနေ့က ပရိသတ် ၂၀၀ နီးပါး တက်ကြောင်း၊
ခရစ်ယာန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဆုတောင်းစကားများ ချီးမြှင့်ကြောင်း၊
ကရင်လူမျိူးစုတို့က မိမိအမျိုးသားသီချင်း သီဆိုကြကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
(ဓာတ်ပုံများ – လောအယ်စိုးနှင့် သူ့မိသားစု)
(လောအယ်စိုးနှင့် CEPA ပြခန်းစီစဉ်သူများ)
← မှတ်မိသေးတယ် ဂျပန်ခေတ်ဆေးရုံကြီးဝယ် (စာအုပ်အညွှန်း)
SF Burmese Community Book Drive မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲမှာ ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက် →
ဟန်သစ်နိုင် – လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည့် ကိုပါကြီး၏ရုပ်အလောင်းကို မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများက သဂြို င်္လ်ပြီးစီး
One thought on “Law Eh Soe – ဓာတ်ပုံဆရာ လောအယ်စိုးပြပွဲ နောက်တလဆက်တိုးပြမည်”
I am very happy to see your smiling family photo and other photos. Thank you so much for your sharing. I am so proud of your *Mother Irrawaddy Show*. I haveachance to look some photos. It is fantastic photos and I like it so much.